ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ရှောင်ကြဉ်ပါရန်ငါးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ Profile ကိုအမှား
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 24 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
အခါအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဖို့လာ, သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုချိန်းတွေ့ကအရေးကြီးတယ်. သင်နဲ့သင့်ကိုယ်သင် ပတ်သက်. ရှိသမျှကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေအပါအဝင်င်သေချာစေရန်ရှိသည်သင်တို့မူကား, စလတ်ဆတ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းထားလို. နောက်ဆုံးတော့, သင်ထွက်ရပ်ချင်တာလဲ!
မကောင်းတဲ့ / မသင့်လျော်ဓါတ်ပုံများ
ရဲ့ရင်ဆိုင်နေကြကုန်အံ့ It-ပထမဦးဆုံးတွေ့ကြုံမှုဟာအရာအားလုံးကိုဖြစ်ကြပြီးသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံသင့်မှာဘီယာ shotgunning သို​​့မဟုတ်ကင်မရာကိုပယ်အလျောက်လှည့်တစ်ဦးပုံကိုပါလျှင်, သင်အလားအလာရက်စွဲများကိုချွတ် warding နိုင်ပါသည်. သင်ကပိုပြီးသင့်လျော်သောဓာတ်ပုံကောက်ရင်တောင်, မှုန်ဝါးဖြစ်ကြောင်းဓါတ်ပုံတွေကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းကြိုးစား, လွန်းဝေးကွာသောသင်တို့၏မျက်နှာဒါမှမဟုတ်သင်ကာမျက်မှန်ဝတ်ဆင်ထားနဲ့မမြင်နိုင်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်း. သင်တကယ်ပြုံး၏ရိုးရိုးဓာတ်ပုံအံ့ဘွယ်သောအမှုမ.
မလူတိုင်းသဒ္ဒါလိုလားသူသည်နှင့်ဿုံချောင်. သို့သော်, သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံနှင့်သဒ္ဒါအမှားများကိုနှင့်ပြည့်နှက်လျှင်, လူတစ်ဦးဒုတိယအတွေးမပါဘဲသင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile အားဖြင့်မနက်စာအငတ်ခံပြီးမည်အကြောင်း,. မည်သည့်အဓိကအမှားများကိုဘမ်းဆီးခြင်းငှါသင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile အားဖြင့်အခြေခံစာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးခြင်း Run. ငါသည်လည်းစာသားအတိုကောက်နှင့် lingo မသုံး Suggest င့် (ထိုသို့သော "ur" အစားအ "သင်တို့၏" သို့မဟုတ် "BC" ၏အစား "သောကြောင့်" အဖြစ်) သင့်ရဲ့ဆင်းရဲအဖြစ်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုတတ်နိုင်သမျှရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ဖြစ်.
လူမျိုး၏တန်ချိန်ကိုဖတ်မှသာချစ်, ခရီးသွား, ရုပ်ရှင်သွား, ညစာစားအဘို့အလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ထွက်သွား. တချို့အမှုအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်စိတ်အားထက်သန်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ခရီးသွားလာတူ, သင်ကမကြိုက်ဘူးဘာကြောင့်အပေါ်မှာပိုပြီးအသေးစိတ်ရှင်းပြ, သင်ဘူးခဲ့ကြပြီးအသင်သွားလိုရာနေရာအ. ဒါဟာသင်အနည်းငယ် ပို. အသေးစိတ်များကိုမယ်ဆိုရင်စကားလက်ဆုံ starter ဖြစ်လာကူညီပေးနိုင်တယ်. သင်တို့သည်လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြောင်းကိုပိုမိုထူးခြားတဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောနေတာကြိုးစားနိုင်ပါ. ဟေ့, သင်အိုးခွက်အတန်းသို့မဟုတ် spelunking ချစ်စေခြင်းငှါတခြားဘယ်သူသိဘယ်တော့မှမ!
အသေးစား Details ကိုအကြောင်းလဲလျောင်း
ဒါဟာသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသွင်ပြင်လက္ခဏာများပြသချင်သောနားလည်နိုင်ပေမယ်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အသေးစိတ်အကြောင်းကိုမုသာ, ပင်ငယ်လေးသူများ, မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့အမြင့်ခန့်လဲလျောင်း, သင့်ရဲ့အလေးချိန်သို့မဟုတ်တောင်မှသင့်ရဲ့အသက်အရွယ်ပထမဦးဆုံးမှာကြီးကျယ်တဲ့တူမထင်စေခြင်းငှါ, သင်မူကား, နောက်ဆုံးမှာသင်အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်ရက်စွဲတစ်ခုနှင့်အတူတက်ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းလျှင်, သူတို့အငိုက်မိနှင့်သင့်အကြောင်းလိမ်လည်နောက်ထပ်ဘာအကြောင်းတွေးမိစတင်စေခြင်းငှါ. ရိုးသားမှုကအကောင်းဆုံးမူဝါဒဖြစ်.
Talking လွန်း Little သို့မဟုတ်လွန်း
ဘယ်သူကမှသည့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်းကိုဖတ်ရှုတဲ့အခါတိုတောင်းတဲ့တ္ထုတစ်ပုဒ်ဖတ်စေလိုသည်. ပရိုဖိုင်းကိုအရမ်းရှည်လွန်းကြသောအခါ, များစွာသောလူထွက်တေးသွားကိုလေ့နှင့်နက်ဖြန် profile မှာကို click လုပ်ပါ. တူညီတဲ့တိုလွန်းဖြစ်ကြောင်း profiles များဟုဆိုနိုင်ပါသည်. တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုစာကြောင်းများအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်တစ်ဦးက profile ကိုသင်ကြည့်ရှု uninterested ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. နှစ်ဦးအကြားပြီးပြည့်စုံသောအလယ်အလတ်ရှာဖွေခြင်းသည်အဓိကကျသည်, ဒါကြောင့်အသေးစိတ်အချက်ဖို့သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုစောင့်ရှောက်.